यूवा संघ नेपालको म्याग्दी संयोजकमा शिशिर शाही – News Of Nepal
राष्ट्रिय युवा संघ नेपालको केन्द्रीय कमिटीको पोखरामा भएको सचिवालय बैठकले म्याग्दी जिल्ला संयोजकमा शिशिर शाहीलाइ चयन गरेको छ । नेकपा एमालेको बिद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियुबाट एमालेको सक्रिय राजनीति सुरु गरेका शाही अहिले राष्ट्रिय युवा संघमा सक्रिय रुपमा रहेका छन् । बिगतका निर्वाचनहरुमा मातृपार्टी नेकपा एमालेलाइ जिताउनका लागि अग्रमोर्चामा खटेका शाहीलाइ युवा संघको केन्द्रीय कमिटीको बैठकले संयोजक चयन गरेको हो ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को युवा संगठन राष्ट्रिय युवा संघ नेपाल म्याग्दीको संयोजकमा शिशिर शाही चयन भएका शाही बेनी नगरपालिका वडा नं -६ का स्थायी बासिन्दा हुन् । त्यस्तै सोही बैठकबाट युवा संघ नेपाल म्याग्दीका पूर्व अध्यक्ष प्रविण शाही केन्द्रिय सदस्य एवम् म्याग्दी जिल्ला इन्चार्जमा चयन भएका छन् । जिल्ला अध्यक्ष एकजीत राेकालाइ, सृजना के.सी. र किरण बानियाँलाइ केन्द्रिय सदस्यमा मनोनित गरेको छ । राेका र के.सी. मंगला गाउँपालिका-१ कुहुँका बासिन्दा हुन् । सृजना म‌गला गाउँपालिकाकी बहालवाला उपाध्यक्ष हुन् ।
भर्खरै जिल्ला संयोजकमा चयन भएका शाहीले आउँदै गरेका तीन तहको निर्वाचनमा नेकपा एमालेलाइ पहिलो शक्ति बनाएर अगाडी बढ्नका लागि पार्टीले खटाएको र पार्टीकोलागि आवश्यकता परेको जुनसुकै स्थानमा युवालाइ खटाउन कुनै कसर बाँकी नराख्ने बताए । शाहीले आफ्ना पार्टीका नेता कार्यकर्ता तथा अन्य जनवर्गीय संगठनका नेता कार्यकर्ताको लागि आवश्यक परेको समयमा युवा संघ त्यहाँ पुग्नेछ । सबै युवाहरुलाइ समेटेर युवा संघलाइ अझै चुस्त र सक्रियतालाइ पनि अधिकतम तिब्र गति बनाइने छ । अब शुरुमा हुने स्थानिय तहको निर्वाचनमा कसरी एमालेलाइ पहिलो पार्टी बनाउने भन्नेमा युवाहरु केन्द्रित भएर अगाडी बढ्ने शाहीको भनाइ छ ।
युवा संघ नेपालका केन्द्रीय सदस्य सँगै जिल्ला इन्चार्जमा चयन भएका प्रविण शाही युवा संघ नेपाल म्याग्दीका पूर्व अध्यक्ष हुन् । त्यस्तै सृजना के.सी. मंगला गाउँपालिका उपाध्यक्ष हुन् भने एकजित रोका युवा संघका अध्यक्ष हुन् । त्यसैगरी युवा संघ नेपालका केन्द्रीय सदस्य किरण बनाियाँ प्रकाश माध्यमिक बिद्यालयबाट बिद्यार्थी राजनीति शुरु गरेका थिए । अनेरास्ववियुको जिल्ला सह-सचिव भएका बानियाँले पिएन क्याम्पसमा बिद्यार्थी राजनीतिमा सक्रिय थिए । राष्ट्रिय युवा संघको बिदेश विभाग सदस्य तथा सचिवालय सदस्य साथै राष्ट्रिय युवा संघको केन्द्रिय सदस्य भएका बानियाँ बेनी नगरपालिका-६ का स्थायी बासिन्दा हुन् ।